Laurelus နှင့်အတူ F1 Charity Night အတွက် HIGH ရတနာအိပ်မက်
လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးအရလိုအပ်သောအခြေအနေများတွင်နေထိုင်သောကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအားကူညီရန်အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ IWC သည် Laureus Italia Onlus နှင့် ပူးပေါင်း၍ F1 Charity Night တွင်ရန်ပုံငွေရှာဖွေသည်။
Tသူ Laureus လှုပ်ရှားမှုသည်နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား၏ကောင်းချီးကိုရရှိခဲ့သည်။ ဘယ်သူပြောလဲ “ အားကစားသည်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်သောစွမ်းအားရှိသည်”.
Laureus Italia Onlus စိတ်ဓာတ်ကျသည့်ဆင်ခြေဖုံးဒေသများတွင်နေထိုင်သောကလေးများကိုပညာပေးရန်နှင့်ထောက်ပံ့ရန်အားကစားအဖြစ်မွေးစားခဲ့သည်။ အားကစားမှတစ်ဆင့်ကလေးများနှင့်လူငယ်များသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှုများကိုဝေမျှရန်နှင့်လေးစားရန်သင်ယူရန်၊ အတူတကွနေထိုင်ရန်နှင့်ရပ်ရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအဓိပ္ပာယ်ရှိရန်သင်ယူရန်ဖြစ်သည်။
ဘောလုံး၊ ဘော်လီဘော၊ လှိုင်း၊ ရွက်လွှင့်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများစသည့်အားကစားများတွင်လူငယ် ၁၅၀၀ ကျော်ပါ ၀ င်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် Monza F30 Grand Prix မတိုင်မီတွင် Laureus F2018 Charity Night သည် Laureus Italia Onlus ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အားကစား၊ showbusiness၊ စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမှလာသည့်ပွဲများကို Teatro Vetra တွင်မီလန်၌ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံးသည်စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး၏လက်အောက်တွင်လော်ရီးစ်သံအမတ်များနှင့်အတူတကွပါဝင်ခဲ့သည်။
သူတို့ထဲတွင်, IWC (Laureus Italia Onlus ၏အဓိကစပွန်ဆာနှင့်အတူ Mercedes-Benz) တစ် ဦး ကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ် Portofino လက်ဒဏ်ရာ ၈ ရက်အကြာမွန်းအဆင့်၎င်းသည် Laureus F1 Charity Night အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
PORTOFINO HAND- ဒဏ်ရာရ 8 ရက်လအတွင်းအဆင့်
LAURUS CHARITY NIL MILANO 2018 UNIQUE PECECE
IWC မှလက်ဖြင့်လုပ်သောစက်လှုပ်ရှားမှု၊ caliber 59800
ဖြစ်ရပ်မှန်: ပလက်တီနမ် 45 မီလီမီတာ
သင်၏အကြောင်းပြချက်ကိုသင်ပံ့ပိုးပြီးခက်ခဲသောလူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေများတွင်နေထိုင်သောကလေးများနှင့်လူငယ်များကိုသင်၏လေလံဆွဲခြင်းအားဖြင့်ကူညီနိုင်သည် Charity Stars ဝဘ်ဆိုက်.
သင်၏လေလံသည်သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်တွင်တိုက်ရိုက်လေလံပွဲအတွက်ကြိုတင်ရောင်းချမှုခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်th- ကြိုတင်ရောင်းချမှုခန့်မှန်းချက်ပိုမိုမြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှပစ္စည်းများကိုရောင်းချခြင်းမှငွေများထပ်မံကောက်ယူလိမ့်မည်။ CC
မှတ်ချက်0ခုLaurelus နှင့်အတူ F1 Charity Night အတွက်"